Hisy ny fifaninanana ho an’ireo mpianatra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny salon tahaka itony moa dia saika ny fanampiana ny tanora amin’ny fieritreretana sy fisafidianana ny fianarana atony aorian’ny baccalauréat. Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra moa dia entina hampihenana ihany koa ny fialan’ny ankizy amin’ny fianarana ny hetsika. Mba tsy ho lanilany fotsiny ny volan’ireo ray aman-dreny nampiana-janaka fa hahavita ny fianarana eny amin’ny ambaratonga ambony ankizy.Hisy ihany koa ny fifaninanana ho an’ireo mpianatra mikasika ny tontolo iainana. Ohatra amin’izany ny fanovana ny fako any an-tokantrano ampiasana ny amin’ny resaka tokantrano na any amin’ny fambolena, na koa hamokarana ny izany hivadika ho angovo. Rehefa mahavita ireo ny ankizy dia afaka manome vahaolana ho an’ny resaka angovo azo avaozina ohatra.
Maro ireo zavatra hita ao amin’ity hetsika ity. Manampy ny ankizy hijery amin’ireny internet ireny. Betsaka ireo fampianarana tsy andoavam-bola ao amin’ny internet ka mila ampiana ny tanora hahay hijery izany. Tsy ho variana fotsiny amin’ny zavatra tsy mitondra mankaiza. Misy ihany koa ireo tanora no liana amin’ny resaka fandraharahana, ampiana ihany ko aizy ireo amin’izany mba hahita izany amin’ny internet ao. Raha mbola tsy nisokatra ny lanonana dia efa marobe ireo tanora sy ray aman-dreny no niandry teo ambavahady. Raha vinavinaina ho 65000 ireo mpitsidika ho tonga hanatrika ity salon ity dia mety hitombo lavitra tsy araka izay eritreretin’ny mpikarakara izany raha ny fahitana ny firohatr’ireo mpitsidika.
Tena zava-dehibe amin’ny fampandrosoana ny Firenena tokoa ny fanabeazana. Izany anefa tsy vita tsy ifarimbonana, ka mila ny rehetra handray anjara indrindra fa ireo mpisehatra amin’ny resaka fanabeazana ity.
Ny Mcu na ny Maison de la communication des universités no nikarakara izao salon izao ary tonga marobe ireo tombon’andraikitra izay notarihan’ny sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika ary Fanjanarivo Symonette Pascaline tale jeneralin’ny Mcu.
Journée internationale de l’éducation : Faire entendre la voix du milliard d'apprenants victimes de la pandémie Covid-19 - il y a 1 jour
Antilin’I Madagasikara : Fiofanana andiany faha 16 ho an’ny mpampiofana mpanampy - il y a 11 jours